Qatar Airways ayaa heshiis ballaadhan oo dhanka ballaadhinta ah la gashay shirkadda Iberia
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways ayaa heshiis ballaadhan oo dhanka ballaadhinta ah la gashay shirkadda Iberia
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qatar Airways waxay ka sii socotaa halkii ay ka tagtay sannadka 2020, iyadoo sii ballaarineysa iskaashiyada istiraatiijiyadeed ee ay la gashay Iberia heshiis cod-ballaadhin ah. Heshiiska ayaa sare u qaadi doona isku xirnaanta ka dhexeeya labada shirkadood ee isku xira isgaarsiinta isla markaana siin doona fursado safar oo dheeri ah macaamiisheena socdaalka ku maraya inta u dhaxeysa Jasiiradda Iberian, Latin America, Africa, Asia-Pacific iyo Bariga Dhexe iyadoo la marayo garoonka ugu wanaagsan Bariga Dhexe, Hamad International Gegada diyaaradaha. Iibinta meelaha kale ee lagu daray waxay bilaabeen durba duulimaadyada dheeraadka ah ee koodhadhka ah laga bilaabo maanta.
Qatar Airways Madaxa Fulinta Kooxda Mudane Akbar Al Baker, wuxuu yiri: “Waxaan ku faraxsanahay inaan sii balaarino wada shaqeynta naga dhexeysa codeshare iyo Iberia, shirkada ugu weyn Spain iyo duulimaadka hogaaminaya Yurub iyo Latin America. In kasta oo caqabadaha 2020, haddana waxay noo ahayd mudnaanteenna in la ilaaliyo isku xirnaanta caalamiga ah ee la isku halleyn karo ee rakaabkayaga Kordhinta iskaashiga istiraatiijiyadeed ee aan la leenahay Iberia waxay sii xoojineysaa isku xirnaanta u dhexeeya xarumaha Doha iyo Madrid iyagoo hubinaya xulashooyinka safarka ee dabacsan ee macaamiisheenna. Qatar Airways iyo Iberia waxay ku riyaaqeen faa'iidooyinka wadajirka ah ee iskaashigeenu na keenay tan iyo markii la aasaasay 2017, taas oo siinaysa xulasho badan iyo isku xirnaan caalami ah oo aan xuduud lahayn malaayiin rakaab ah. Maaddaama safarradii adduunyadu ay soo kabanayaan, waxaan rajeyneynaa inaan sii ballaarinno iskaashiga ganacsi ee aan la leenahay Iberia oo aan sii wadno bixinta adeegga xiddigga shanta xiddigle ah ee aan la tartami karin oo rakaabkeennu filayeen.
Madaxa Guud ee Kooxda Iberia, Javier Sanchez-Prieto, ayaa yiri: “Kordhinta heshiiska codeshare ee Qatar Airways waa war aad noogu wanaagsan. At Iberia waxaan u shaqeyneynaa si markaa, marka waddamadu ay baabi'iyaan xayiraaddooda, aan ugu deeqi karno macaamiisheenna shabakadda ugu ballaaran uguna ballaaran ee suurtogalka ah. Kordhinta heshiiskan codeshare ee annaga mid ka midShirkadda caalamiga ah ee Qatar Airways, waxay suuqyo cusub ka furaysaa Australia iyo Afrika waxayna hagaajineysaa isku xirnaanta aan ka bixinno Spain iyo adduunka intiisa kale iyadoo adeeg aad u sarreeya oo uu noo soo bandhigo lamaanaheenna Qatar Airways. ”
Wadashaqeynta ganacsiga ee la ballaariyay waxay kordhin doontaa tirada duulimaadyada ay heli karaan rakaabka Iberia laga bilaabo 29 ilaa 36 shabakadda Qatar Airways, oo ay kujirto safarada cusub ee Angola, Australia, Mozambique, New Zealand iyo South Africa. Rakaabka Qatar Airways ayaa sidoo kale ka faa'iideysan doona isku xirnaan dheeri ah, iyadoo awood u leh inay ballansadaan safarka iyo ka soo qaadashada afar meelood oo dheeri ah oo ku teedsan shabakadda Iberia ee Brazil, Chile, El Salvador, Guatemala iyo Senegal. Sida mid ka midWada-hawlgalayaasha xulafada adduunka, Qatar Airways Privilege Club iyo xubnaha Iberia Plus waxaa loo xaqiijiyey in la aqoonsan yahay heerka ay ku sugan yihiin oo leh faa'iidooyin ay ka mid yihiin helitaanka qolalka qolalka adduunka oo dhan, iyada oo loo marayo hubinta, gunnada alaabooyinka dheeriga ah, soo-gelitaanka mudnaanta leh iyo soo-dejinta oo lagu daro lacag-ururinta iyo furashada maylaad shabakadaha wadayaasha wadaagga.